Iindaba-Xa kufikwa kwitshokholethi, imalunga nexesha!
Ngaba itshokolethi ikwenza utyebe?Kubonakala ngathi akukho mathandabuzo ngako.Njengophawu lweswekile ephezulu, amanqatha, kunye neekhalori, itshokholethi iyodwa ivakala njengokwaneleyo ukwenza i-dieter ibaleke.Kodwa ngoku abaphandi beYunivesithi yaseHarvard baye bafumanisa ukuba ukutya i-tshokoleta ngexesha elifanelekileyo yonke imihla kunokunceda ukutshisa amanqatha kunye nokunciphisa iswekile yegazi, kunokuba kubangele ubunzima.
Uphononongo lwangaphambili lufumene ubudlelwane obuxhomekeke kwidosi phakathi kwemikhwa yokutya yetshokolethi kunye nokuzuza ubunzima bexesha elide, ngakumbi kubasetyhini abasemva kokuya exesheni, abanokuthi batyebe.Ngaphezu koko, ukutya amandla aphezulu kunye nokutya okuneswekile ephezulu njengetshokholethi ngamaxesha "angafanelekanga" kunokuchaphazela inkqubo ye-circadian yomzimba kunye nomsebenzi we-metabolic, okukhokelela kumngcipheko okhulayo wokutyeba.
Ukufumana iziphumo zokusetyenziswa kwetshokolethi ngamaxesha ahlukeneyo, abaphandi baqhube uvavanyo lwe-crossover olulawulwa ngokungahleliwe kunye nabasetyhini be-19 be-postmenopausal.Kwimeko yokutya simahla, izifundo kusasa (MC) nangokuhlwa (EC) amaqela atya i-100g yetshokholethi yobisi (malunga ne-542 calories, okanye i-33% yemihla ngemihla yamandla) kwiyure enye yokuvuka ekuseni okanye iyure enye. ngaphambi kokulala ebusuku;Elinye iqela alizange liyitye itshokolethi.
Emva kweeveki ezimbini, abasetyhini kumaqela asekuseni nangokuhlwa abafumananga ubunzima obukhulu, nangona itshokolethi yongeze iikhalori.Kwaye amanqeni amabhinqa ayecutheka xa esitya itshokolethi kusasa.
Oku kwakungenxa yokuba ukutya kwetshokolethi kunciphise indlala kunye neminqweno yamazinyo aswiti (P<.005) kunye nokunciphisa amandla angenayo i-~ 300 kcal / imini ngexesha le-MC kunye ne-150 kcal / imini ngexesha le-EC (P =. 01), kodwa ayizange ihlawule ngokupheleleyo igalelo lamandla elongezelelweyo letshokolethi (542 kcal / ngosuku).
Uhlalutyo lwecandelo eliphambili lubonise ukuba ukusetyenziswa kwetshokolethi ngamaxesha amabini kubangele ukuhanjiswa kwe-microbiome eyahlukeneyo kunye nomsebenzi (P<.05).Iimephu zokushisa kwe-Wrist kunye neerekhodi zokulala zibonise ukuba i-ec-induced episodes sleep episodes yayiqhelekileyo kune-MCS kwaye ibe nokuhluka okuphantsi kweentsuku zokulala (imizuzu ye-60 vs. 78 imizuzu; P =. 028).
Oko kukuthi, ukutya i-tshokoleta kusasa okanye ebusuku kunokuba nemiphumo eyahlukileyo kwindlala, ukutya, i-substrate oxidation, ukuzila i-glucose yegazi, ukubunjwa kwe-microbiome kunye nomsebenzi, ukulala kunye nezigqi zokushisa.Ukongeza, itshokolethi ikwanefiber yokutya, enokuthintela kunye nokuphelisa ukuqhina, ikhuthaze umzimba ukuba ukhuphe i-metabolites endala, ithintele imibimbi kunye namabala, kwaye idale indawo elungileyo yobuhle bolusu.
Ke, ukutya itshokolethi ngexesha elifanelekileyo, akuyi kutyeba nje kuphela, kodwa kunokuba mncinci.Kodwa "ubuninzi bukhokelela kumgangatho," kwaye ukuba utya itshokolethi eninzi, iziphumo zisenokungafani.